प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन उल्लंघन, दुई महिनामा चार दर्जन कर्मचारी विदेश भ्रमण ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ३ बैशाख २०७५, सोमबार ०३:०३ |
काठमाडाैँ । विदेश भ्रमण नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन लत्याउँदै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० का वैज्ञानिकहरू विदेश भ्रमण गइरहेका छन्।
नार्क स्रोतका अनुसार फागुन र चैतमा गरी करिब तीन दर्जन कृषि वैज्ञानिकले विदेश भ्रमण गरेका छन्। यसबाहेक करिब एक दर्जन प्राविधिक ९राजपत्रअनंकित० कृषि अनुसन्धानका नाममा विदेश भ्रमणमा गएका छन्। थप दर्जनजति कृषि वैज्ञानिक वैशाखमा विदेश भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। आजकोनागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा। वैद्यनाथ महतो एक साताका लागि भन्दै बुधबार मोरक्कोतिर उडेका छन्। उनले टेकबहादुर गुरुङलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन्। उनले गुरूङलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको पत्रमा आफू काम विशेषले काठमाडौं बाहिर जानुपर्ने भएको लेखेका छन्। तर पत्रमा भ्रमण कार्यालय प्रयोजनका लागि हो या व्यक्तितगत प्रयोजनका लागि हो भन्ने खुलाइएको छैन। तर स्रोतका अनुसार उनी कार्यालय प्रयोजनका लागि मोरक्को गएका हुन्।
Previousअष्ट्रेलियामा स्व. नेता खुमबहादुर खड्काको तेह्रौं पुण्य तिथीको अवसरमा श्रद्धाञ्जली सभा
Nextचन्दा माग्न गएका विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ